10 Dhibaatooyinka Most-weydiiyo oo ku saabsan iPhone Updates
Waa Maxay jailbreak
Jailbreak loo yaqaan jabsiga iyo helo oo dhan dhammaan dhinacyada iPhone in aadan u malaynayeen in ay mashaqo leh. Sida caadiga ah, tani waa hogaanka degdeg ah ilaa mid ka mid rakibidda barnaamijyada qabow, ibo dukaamada waaweyn ee loo isticmaalo ka mid ah network gacanta, ama labadaba.
In koorsada jailbreaking, waxa aad awoodi kartaa in aad ku darto barnaamijyadooda dheeraad ah si aad iPhone. Waxaa u fasaxaya inaad sidaas sameysiid ay ku daray ilaa app lagu magacaabo Cydia in aad iPhone. Waxa kale oo ay u dul qaadasho modding (beddelo) ee iPhone gudbiyeen oo walxood, wallpaper, dekedda, xaaladda bar, goobooyinka chat, soo jeeda cimilada, iyo keyboard, iwm
Jailbreaking aan furo! Waxaa gebi ahaanba halis xor ah oo xalaal gebi ahaanba. Dhammaan shaqeeya hor jailbreaking sii wadaan in ay u shaqeeyaan ka dib. Jailbreaking oo keliya ku darayaa muuqaalada. Jailbreaking halis xor ah oo aan ka tirtiri kartaa damaanad.
10 Talooyin ku iPhone jailbreak iyo iPhone Update
1). Jailbreak ku guuldareysto ama shilalka iPhone JAILBREAK iyo siinayaa ilaa. Maxaan sameeyaa?
Sida ugu dhakhsaha badan isku dayay mid ka mid ah tallaabooyinka hoos ku qoran, hubi in code MAYA pass waa qalabka iPhone aad. Tani ayaa sidoo kale loo yaqaan in ay hakad ama shil dhowr utilities JAILBREAK kala duwan. Haddii aad rabto, in aad si fudud dib u awood karo ka dib markii jailbreaking. Laakiin waqti isku mid ah sida aad u qabtaan geedi socodka, waa in ay hubiso in aad iPhone LAGAMA habayn qufulan.
1. Qaybta ugu muhiimsan waa in la hubiyo in qalabka aad dayayaan in ay isticmaalaan si fiican u taageerayaan nidaamka madal iyo qalliinka aad isticmaalayso.
2. Dami aad iPhone oo dib ugu soo laabtay furaysto. Haddii ay suurtagal tahay, isku day inaad USB cable ama deked kala duwan ee computer kale.
3. Hubi in aad firmware iPhone taabto waa la jaan qaada qalabka aad dayayaan in ay isticmaalaan.
4. Xoq hawlaha JAILBREAK ka your computer iyo u dib-u-soo dajiyo inuu meesha ka saaro musuqmaasuqa ah loo soo dajiyo.
5. Haddii ay macquul ah, isku day in aad jailbreaking iPhone ka computer ka duwan ama kala duwan. Haddii ay u shaqayso, dhibaatooyinka u badan tahay in la jiifsado your computer dhabta ah. Sida note koox, hubi in aad socda sida maamule haddii aad socda arrimaha computer. (Admin daaqado, Sudo u isticmaala Mac)
6. Dib isugu habee oo dhan goobaha aad iPhone. Gala Settings> General> celi> celi goobaha oo dhan. Tani ma tirtiri doonaa mid ka mid ah xog muhiim ah in aad ka iPhone, laakiin waxa ay ku bilaabi doono oo dhan goobaha nidaamka default.
7. Haddii computer ka duwan ma shaqeeyaan, dhibaato waxaa laga yaabaa in ay u badan tahay waxa uu leeyahay waxoogaa la sameyn kartid iPhone laftiisa. Back aad iPhone in Lugood ama via iCloud. Masax iPhone in warshad iyo mar kale isku dayaan habka JAILBREAK ah. Waxaad tirtiri kartaa iPhone adigoo samaynaya nadiif ah soo celin via Lugood ama in Settings> General> celi> masixi content oo dhan iyo goobaha
2). JAILBREAK waxay u muuqataa in ay ka shaqeeyeen, laakiin anigu ma heli karo Cydia si loo soo dajiyo, waxaan u hesho baadi shabakad
1. Tani waxay dhacdaa badan haddii aad isticmaalayso qalab sida Greenpois0n in loo baahan yahay in aad u bilowdo ay icon si loo helo Cydia. Isku day tegaya Settings> General> Network> iyo Daar aad VPN. (Haddii VPN waxaa aad u codsaneynaa sirta ah, kaliya wado la maran duurka.) Your telefoonka waa inay ku siin qalad ah ka dibna reboot. Marka ay timaado dib, adiga "waa" hadda leeyihiin Cydia.
2. Haddii aad telefoon ma aadan bixin ah baadi iyo reboot ka dib markii toggling in ON ama aanu ku siin qalad ah, isku day resetting goobaha aad network hoos Settings> General> celi> celi oo dhan Settings Network, ka dibna isku day toggling VPN on mar kale .
3. Haddii mid ka mid ahaa tallaabooyinka kor ku leedahay soo gala tallaabo, bet ugu wanaagsan waa fayodhowr celin ku saabsan iPhone ka dib markii aad xoojiyaa xogta oo dhan. Jailbreak nadiif ah oo soo celin karaa macluumaadkaaga.
3). Your JAILBREAK ka soo shaqeeyay iyo baan ka heli karaa in Cydia laakiin inaan ka soo raynayo khaladaad ama aan kala soo bixi kartaa wax
The qaladaad ku xiga waa wax caadi ah
MAGACA server, xiriir diiday - server in laga yaabaa inay tahay ama buux dhaafiyey. Wax aad u baahan tahay in la sameeyo ku saabsan dhamaadka. Tusaale ahaan, waxaan heli qalad ka POSIX hadda ka dibna.
4). Waxaad aadan awoodin in ay helaan file u xirmo libactivator ah. Tan macnaheedu laga yaabaa in aad u baahan tahay si uu u xaliyo xirmo this naftaada.
Waxaad dareemi doonaa haddii aad qalad ma aad wax ka Cydia rakibi karaa. Salayo, waxba. Waa dhab ahaantii arin aad u fudud. Gala Settings> General qalab ee> celi> celi goobaha network. Tani waa xaliyo arrinta wax aad la libactivator erroring baxay.
5). Sidee in aad iPhone in hab kabashada:
1. marooji iPhone buuxda iyo barkinta ka cable / dekedda ah.
2. Jilbuhu ku hoos button guriga.
3. Inkasta oo haysta button guriga hoos, waa in aad la xidhi ilaa computer leh cable (fudud) ama dajinayo.
4. Ka dhig haysta hoos button guriga ilaa aad ka aragto shaashadda ah Connect-to-Lugood. Adigu hadda waxaad tahay hab kabashada.
Si aad u cararaan Mode Recovery iyo amarka telefoonka off, si fudud u qabtaan hoos badhamada xoog iyo guriga toban ilbiriqsi.
6). Sidee in aad iPhone in hab DFU:
1. Ku biir aad iPhone si aad u computer shakhsi.
2. Demi aad iPhone.
3. Button Press xoog iyo guriga wadajir 10 ilbiriqsi (dhab ah).
4. Fur awood Laakiinse ay xajiyaan button guriga ilaa uu biiq ka kombiyuutarada (arkay on PC a) haysteen qalab USB la aqoonsan yahay.
5. A dhowr ilbiriqsi 'ka dib, waa in la ogaado Lugood aad iPhone.
6. Haddii Logo u Soo Celinta joogo shaashadda, aad ku sugan tahay Recovery Mode, ma DFU.
7). Sida loo dayactir aan dhamaanayn dhibaatooyinka reboot laab aad jailbroken iPhone
Hadda oo JAILBREAK ee iPhone socda macruufka 6.1 / 6.0 waa ka baxay, wax badan oo aad dadka ay tijaabinayaan aad iPhone by rakibidda uga faaidaysan, beddelo mawduucyada iyo qabanayaan jiray cayn kasta oo Ambaasadoor. Nasiib darro, sababo la xiriira gaaban JAILBREAK tan iyo muddo dheer, horumarinta aan waqti badan si ay u hubiyaan uga faaidaysan ay ka shaqeeyaan iyada oo aan wax kala carar ku macruufka 6.x, taas oo macnaheedu yahay in rakibidda uga faaidaysan qaarkood waxay keeni kartaa in dhaqanka la rabin helay sida shilalka ama wareegyo reboot xitaa aan dhamaadka lahayn.
8). Haddii aad qabto iPhone ka shaqeeya in ka dhigi kartaa calls, laakiin iPhone waa laggy ama kaliya simaha qalaad, arrintaasi waxay noqon kartaa dhibaato app. Kuwa soo socda waa qaar ka mid ah siyaabaha loo ogaado dhibaato codsiga.
. • Waxaad ku xanibmeen app ah oo aan awoodo inuu uga takhaluso
• nolosha Battery waxaa maaanka ka dhaqso badan aad ka filan ay sabab u tahay geedi socodka soo jeeda.
• Apps isku sida ugu dhaqsaha badan aad iyaga abuurtaan.
1. Force-ka tago barnaamijka hawlgalka hagaajin kartaa dhibaatooyin la codsiga hal qaybta loo yaqaan "Force tago Codsiga iPhone ah".
2. Rebooting aad iPhone aad u helo dowlad la aqoonsan yahay. Qaybta loo yaqaan "reboot Your iPhone" iyo ul wax alla wixii muddada gaaban ee dhibaato ahaa ee ka dhaca.
3. Uninstalling ama karti xun, jebiyey, ama khilaafsan barnaamijyada-gaar jeeda maaraysa qaybta loo yaqaan "Soo Celinta ceshan Your iPhone" caawimo -can.
4. Heshiis version cusub ee codsiga in uu si fiican u-kulan aad firmware.
5. Waxa ay noqon kartaa xun ama ka xun app goobaha. Tag Settings → General → Dib u celi → Dib u celi All Settings, taasoo ahaaneysa barnaamijyadooda ugu iyo sidoo kale goobaha habka qaabeynta.
9). Sixidda iPhone ah ku xayiran garoonka Apple Logo
Ka dib markii jailbreaking, xariirta nidaamka qalliinka, ama soo celinta kaga imaanayo iPhone ah, dhibaatooyin ay mararka qaar ka dhaca oo aad iPhone aan si sax ah Boot doonaa. In boos this, aad iPhone uga istaagi karaa logo Apple ah, ama mararka qaarkood in loop aan dhammaadka lahayn ee rebooting - labadaas arrimood oo la moodo qalabka ku noolyihiin.
Inta badan xaaladaha, waxaad xalin karo dhibaatooyinkaas oo dhan adigoo aad iPhone galay hab dib u soo celinta iyo ka gurmad. Si taas loo sameeyo, RAAC TILMAAMAHAN:
1. Isku aad iPhone ee USB cable si aad u computer, laakiin ma aad iPhone.
2. Demi aad iPhone. Haddii aad iPhone aan laga noqon doonaa hab dhaqanka, kaliya haysta badhamada ilaa shaashadda tagaa madow.
3. Marka aad u soo jeestay iPhone ka baxsan, riix badhanka guriga ah iPhone iyo surin in cable USB aad dekedda isku xira iPhone ee. Ee
4. Marka ay muuqato on, sii riixaya badhanka guriga ilaa logo Lugood u muuqataa shaashadda.
5. Waxaad ogaan doontaa in aad iPhone hadda waa in hab-kabashada, sababtoo ah suuqa kala ah Lugood kuu sheegi doonaa.
6. Markaas Waxaad bilaabi kartaa habka soo celin adigoo riixaya "Soo Celinta" button furmo Lugood ah.
10). U dayactir u Dhibaatada daryaan Cydia
• Isku in aad iPhone via labada Ssh, terminal mobile, ifile, diskaid ama nooc kale oo ka mid ah nidaamka file USB browser qaar ka mid ah. Browse si / var / V / badnaayeen / liisaska /
• Delete cydia.zodttd-1.com_repo_cydia_dists_stable_main_binary-iphoneos-arm_Packages.
• Ku rakib update cusub si Cydia in this hagaajin.
Ka iPhone Bedelka Content in Computer
A Transfer Tool Eebaha iPhone Waxaad u
17 Apps Free Best on iPhone
Faylal ay ka iPhone Bedelka in Computer
/ Xogta laga BlackBerry wareejiyo iPhone
> Resource > iPhone > 10 Dhibaatooyinka Most-weydiiyo oo ku saabsan iPhone Updates iyo iPhone jailbreak